Maduro Sy Capriles No Hamaritra Ny Hoavy Ara-Politikan’i Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2013 22:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Dansk, English, Español
Tsy azo antoka ny hoavin'i Venezoela taorian'ny nahafatesan'i Hugo Chávez.
Ny firosoan'ny ‘chavism’ tsy misy an'i Chavez izao no tena ifantohan'ny resaka amin'izao fotoana, sary iray nanomboka nipoitra tany amin'ny 9 Desambra 2012 tany ho any. Tamin'izay andro izay, tao anatin'ny fisehoany imasom-bahoaka farany [es] no nametraka ny fototra sy ny torolàlana rehetra ho fanohizana ny tetikasa ara-politikany ny Filoha, tetikasa izay mametraka ny tenany manokana ho ivon'ny zavatra rehetra.
Na ohatra aza ny Lalam-panorenana [es] ka manome torolàlana manokana moba ireo dingana arahana aorian'ny fahabangan-toeran'i Chavez, ny fomba fandikàna samihafa atao an'ilay antontan-taratasy kosa dia niteraka resabe teny anivon'ireo mpisehatra ara-politika ao amin'ny firenena.
Fernando Soto Rojas, filoha teo aloha ary solombavambahoaka ao amin'ny Antenimieram-Pirenena (AN)[es] dia nilaza fa Diosdado Cabello, filohan'ny AN amin'izao fotoana, no tokony handray ny fitantanana ny Fahefàna Mpanatanteraka. Kanefa, ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny, Elías Jaua, niteny [es] hoe ny filoha lefitra Nicolás Maduro no hisahana ny toeran'ny filoha vonjimaika ary ho kandidà avy amin'ny Antoko Sosialista Mitambatra ao Venezoela (PSUV) amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena manaraka eo, izay raha araka ny lalàm-panorenana ao Venezoela dia hatao afaka 30 andro.
Raha izany àry, dia nanoratra i Suhelis Tejero (@suhelis) [es] ao amin'ny Twitter fa toa i Soto Rojas no ho hany tokana manaraka ny lalàm-panorenana ao Venezoela
@Suhelis: PaFace à ces contradictions, Suhelis Tejero (@suhelis) soulignait sur Twitter que seul Soto Rojas respectait la Constitution vénézuelienne.rece que el único que sabe leer la Constitución de Venezuela en el oficialismo es Soto Rojas.
@Suhelis: Sahala amin'ny hoe i Soto Rojas no hany olona tokana mahay mamaky ny lalàm-panorenana ao anatin'ny antoko eo amin'ny fitondràna
Manaiky i Luis Carlos Díaz (@luiscarlos) [es] fa mifamatotra amin'ny fahafahana mahazo ireo fitaovana ireo ho entina manao fampielezan-kevitra no nandraisana ilay fanapahan-kevitra hametraka an'i Maduro ho filoha vonjimaika.
@luiscarlos: Miainga amin'ny zava-misy ny governemanta: ny fitazonana an'i Maduro eo amin'ny fitondrana dia ahafahan-dry zareo manomana fampielezan-kevitra iray hafa mihoam-pampana amin'ny fifidianana.
Amin'ny lafy mifanohitra amin'izay, ny Fiaraha-mientana Ho amin'ny Firaisana Demaokratika (MUD) dia namoaka fanambaràna iray [es] maneho ny fiaraha-mioriny amin'ny fianakaviana sy ireo mpomba ny filoha Chávez. Maro no nandray izay fihetsika izay ho toy ny fanambaràna matotra ny haha-kandidà an'i Henrique Capriles Radonski hiatrika an'i Maduro mandritra ny fifidianana hoavy, satria izy no niresaka tamin'ny vahoaka. Nahazo ny 45% tamin'ny vatom-pifidianana i Capriles fony izy nifaninana tamin'i Chávez tamin'ny Fifidianana natao ny 7 Oktobra 2012.
Heverin'i José Miguel (@JoseMiguelIRDS) [es] fa ny governora ankehitriny ao Miranda no hihazakazaka hifaninana ho filohan'i Venezoela hiatrika an'i Maduro
@JoseMiguelIRDS: Manjary mazava ankehitriny fa i Capriles no kandidà
Nolazain'i Maria Gabriela Méndez (@MaGaMendez) [es] fa miaraka amin'ny fahafatesan'i Chavez, dia fideràna iray vaovao no teraka.
@MaGaMendez: Maty ny lehilahy iray, finoana iray kosa no teraka.
Ny hafa, tahaka an'i Armando Daniel Armas (@ArmandoArmas) [es], dia mihevitra fa tsy eo an-tànan'ny governemanta ny hoavin'i Venezoela fa eo an-tànan'ny vahoakany.
@ArmandoArmas: Tsy mifamatotra amin'olon-tokana akory ny hoavin'ny firenena, fa ny fahaizantsika rehetra, amin'ny maha-olom-pirenena, hanam-piniavana hiasa ho an'i #Venezuela
Betsaka ny kisary sy ny mety ho fandehany azo sainina fa hanomboka hiseho, saingy efa ela kosa ny habaka no niady hevitra sy niresaka mikasika azy ireny. i Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) [es] sy Naky Soto (@Naky) [es] dia nametraka “Google hangout” iray efa hatrany alohan'ny fifidianana natao ny Oktobra 2012, ary amin'ity indray mitoraka ity – noho ny fahafatesan'i Chavez – nifanakalo hevitra sy nandalina izay mety hoavy ara-politikan'i Venezoela ry zareo.